Arthik Page – Pursuit of Prosperityके हो अफगानिस्तानमा तालिबान आएपछि चर्चित बनेको सरिया कानुन ? - Arthik Page - Pursuit of Prosperity
के हो अफगानिस्तानमा तालिबान आएपछि चर्चित बनेको सरिया कानुन ?
२०७८ भाद्र ३ गते बिहीबार, २२:२२ मा प्रकाशित
अफगान सत्ता तालिबानले कब्जा गरेपछि सरिया कानुन विश्वभर चर्चित बनेको छ । यसको कारण दुई दशक लामो युद्ध टुंगिएको घोषणा गरेको तालिबानले त्यहाँ सरिया अर्थात इस्लामिक कानुन अनुसार शासन चलाउने बताउनु हो । काबुल नियन्त्रणमा लिएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानका एकजना प्रवक्ताले इस्लामिक कानुन अनुसार महिला अधिकारको सम्मान गरिने प्रतिक्रिया दिए । तर उनीहरुले व्यवहारमा त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् ।
पाकिस्तानमा बालिका शिक्षाको पक्षमा अभियान चलाएबापत १५ वर्षकै उमेरमा तालिबानको गोली खाएकी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले भने सरिया कानुनको तालिबानले गर्ने व्याख्या महिला र बालिकाका लागि कहालीलाग्दो हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
‘मैले अफगानिस्तानमा केही अभियानकर्मी र महिला अधिकारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएकी थिएँ, उनीहरुले आफ्नो जीवनमा कस्ता दिन आउने हुन् भन्ने निश्चित नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे,’ उनले बिबिसीसँग भनेकी छिन्, ‘उनीहरुमध्ये अधिकांशले सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको तालिबान शासनकालमा के भएको थियो भन्ने कुरा सम्झिए अनि आफ्नो सुरक्षा, अधिकार, संरक्षण र विद्यालयसम्मको पहुँचबारे चिन्तित बने ।’
तालिबानहरु सरियाको कठोर व्याख्याका लागि परिचित छन्, जसमा हत्या र परस्त्री वा परपुरुषगमनका घटनामा सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड जस्ता भयानक सजाय पर्छन् ।
सरिया इस्लामको कानुनी प्रणाली हो । यो इस्लामको पवित्र ग्रन्थ कुरान, सुन्नाह र हदिसबाट आएको हो । कुरानमा पैगम्बर मोहम्मदको कार्य र भनाइहरु समेटिएका छन् । कुरानले सिधै जवाफ नदिएको वा कुरानबाट सिधा जवाफ प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा धार्मिक विद्वानले खास विषय वा प्रश्नमा आदेश वा निर्देशन दिन्छन् ।
सरियाको शाब्दिक अर्थ प्रस्ट, र जलतर्फको प्रस्ट बाटो भन्ने हुन्छ । सरिया सबै मुस्लिमले अनुशरण गर्नुपर्ने आचार संहिता मानिन्छ । सरियाले प्रार्थना, उपवास, दानलाई सार्थक जीवनको अनिवार्य पक्ष मानेको छ । सरियाले मुस्लिमलाई ईश्वरको इच्छा अनुसार जीवनका हरेक पक्ष बुझ्न मदत गर्छ ।
व्यवहारमा यसको अर्थ के हो ?
सरियाले हरेक मुस्लिमलाई दैनिक जीवनका सबै पक्षबारे जानकारी दिन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै मुस्लिमलाई साथीले रेस्टुरेन्टमा बोलायो भने त्यहाँ के गर्न हुन्छ के हुँदैन भनेर ऊ द्विविधामा पर्यो भने उसले सरिया विद्वानसँग सल्लाह लिन्छ । मुस्लिमहरुले विद्वानसँग रायसल्लाह लिनु दैनिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पारिवारिक कानुन, आर्थिक र व्यावसायिक पक्षहरु हुन् ।
कठोर सजायहरु के के छन् ?
सरियाले अपराधलाई दुई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेको छ, एउटा ‘हद्द’ कसूर, जसमा हुने सजाय तोकिएको छ । र अर्को ‘तजिर’ अपराध यसमा सजाय न्यायाधीशले आफ्नै तजबिजमा तोक्छ । हद्द कसूरमा चोरी पर्छ, जसमा सजाय स्वरुप दोषीको हात काट्न पनि सकिन्छ ।
त्यसैगरी परस्त्री वा परपुरुषगमन पनि यसमै पर्छ र कठोर सजाय हुन सक्छ । हद्द सजायको लागि थुप्रै बचाउ र यथेष्ट प्रमाणको व्यवस्था छ । केही मुस्लिम मुलुकहरुले हद्द कसूरमा कठोर सजाय दिन्छन् । अध्ययनहरुले कठोर सजायप्रतिको मुस्लिम धारणा ठाउँअनुसार फरक रहेको देखाएका छन् ।
आदेश कसरी दिइन्छ ?
अन्य कानुनी प्रणाली जस्तै सरिया पनि जटिल छ र यसको अभ्यास पनि विज्ञको गुणस्तर र प्रशिक्षणमा निर्भर छ ।
इस्लमिक विधिशास्त्रीहरुले निर्देशन र आदेशहरु जारी गर्छन् । औपचारिक कानुनी आदेश मानिने त्यस्ता निर्देशनलाई फत्वा भनिन्छ । सरिया कानुनका पाँचथरी फरक स्कुलहरु छन् । जसमा चारवटा सुन्नी डक्ट्रिन छन्– हन्बाली, मलिकी, साफी र हनाफी र एउटा सिया डक्ट्रिन, सिया जाफरी छ । ती पाँचवटै डक्ट्रिनले सरिया कानुनका विषयवस्तुलाई आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्छन् ।
गरिमा विकास बैंकबाट जनचेतनामूलक सामग्री हस्तान्तरण
हेटौंडा–काठमाडौं सडकको सिस्नेरी खण्ड अवरुद्ध